Laptọọpụ Huawei: ihe kacha mma na-enye na ụdị ya niile
Ọ bụrụ na ị na-atụle ịzụrụ a Huawei laptọọpụ ị kwesịrị ịma na ha so na ndị kasị ewu ewu na ahịa. Ụlọ ọrụ China abatala n'oge na-adịbeghị anya, mana ọ gbawara n'ike n'ihi njirimara ya na ọnụahịa ya. Site na ngwaike ọgbara ọhụrụ, wuru nke ọma, nhazi mara mma na enweghị nsogbu.
Ọzọkwa, ịkwesighi ichegbu onwe gị maka mkpọchi US na China ka eji ere laptop niile Ndị nrụpụta AMD na Intel na eserese NVIDIAyana Windows 10 etinyegoro ya na-enweghị ihe mgbochi ọ bụla. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, enweghị oke dị otú ahụ, bụ nke kacha mebie akụkụ ngwaọrụ mkpanaka ...
1 Laptọọpụ Huawei kacha mma
2 Huawei ọ bụ ezigbo akara laptop?
3 Ụdị laptọọpụ Huawei
4 Uru nke laptọọpụ Huawei
5 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Huawei dị ọnụ ala
6 Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ Huawei dị ọnụ ala?
7 Laptọọpụ Huawei, ọ bara uru ya? Echiche m
Laptọọpụ Huawei kacha mma
Huawei ọ bụ ezigbo akara laptop?
Dị ka Xiaomi mere, Huawei Ọ bụkwa ihe ọzọ n'ime ndị dike nke teknụzụ mkpanaka na nzikọrịta ozi ewerela nzọụkwụ gaa na laptọọpụ. Otu mba China nke gbapụrụ iche maka R + D + i ya, yana maka nnukwu ihe ọ rụzuru nke mere ka ọ na-edu na ngalaba ụfọdụ.
Ihe pụrụ iche ma ọ bụrụ na ị na-atụle na ọ tọrọ ntọala site engineer Ren Zhengfei na mbụ mmefu ego nke $ 3000 na naanị 3 ọrụ, na-eru afọ iri atọ ka e mesịrị na-ruru ọtụtụ nde mmadụ. Ya mere, mgbe ịzụrụ otu n'ime ngwaahịa ha, ị nwere ntụkwasị obi inwe nnukwu ụlọ ọrụ n'azụ ha na onye na-eche banyere ihe ha na-eme, ma ọ bụghị ya, ha agaraghị eru n'ọnọdụ ahụ.
Na usoro nke nchekwa, ihe ụlọ ọrụ a boro US ebubo, ka anyị dị oké njọ. Ọ bụghị ihe nzuzo na ọtụtụ ọrụ na ngwanrọ na-eji data ndị ọrụ ha eme ihe, mana ọ bụghị ihe Huawei na-ejide onwe ya, ọ na-emekwa ụdị ndị America ndị ọzọ. Ya mere, n'echiche ahụ ọ dịghị ihe dị iche na ndị ọzọ ... Na mgbakwunye, Microsoft na-enye mmelite nchekwa ya maka ụdị ọ bụla, ọ naghị ejedebe patches maka ịbụ Huawei.
Na, ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị ntụkwasị obi na àgwà, Buru n'uche na a na-emepụta ọtụtụ laptọọpụ (Apple, Microsoft, Dell, HP, ...) na China, site na otu ODM dị ka Huawei's, ya mere n'echiche ahụ, ị ​​gaghị enwe nchegbu karịa n'ọnọdụ ndị ọzọ. Na nkenke, ị gaghị enwe nsogbu ọrụaka karịa ụdị ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, dị ka ị pụrụ ịhụ na ngalaba na na uruOtu ndị a nwere njirimara pụrụ iche nke ị gaghị ahụ na ụdị ndị ọzọ. Nke ahụ na-eme ka ha mara mma karịa, na-atụle ọnụahịa ha na na ha bụ akwụkwọ ultrabook na-arụ ọrụ dị elu ...
Ụdị laptọọpụ Huawei
Dị ka ọ dị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, Huawei nwekwara dị iche iche usoro iji dị iche iche ebumnobi, na ụdị ya dị iche iche na nke ọ bụla n'ime ya. Ya mere, ọ na-enye ohere iji mejuo ọtụtụ ndị ọrụ dị iche iche:
Akwụkwọ Huawei Mate: ha bụ ihe eji eme ihe, nke ezubere maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu, a na-ejikwa ha maka ihe niile, ebe ọ bụ na ha nwere nhazi nhazi nke ọma iji rụọ ọrụ nke ọma na akpaaka ụlọ ọrụ, edezi, egwuregwu vidiyo, wdg.
Huawei MateBook DHa bụ akwụkwọ ultrabook kacha dị mfe na nke kacha nta, yana ịdị ọnụ ala ma na-enye ndụ batrị ogologo. Ha dị mma maka ịmụ ma ọ bụ jiri ngwa ọkụ rụọ ọrụ, dị ka akpaaka ụlọ ọrụ, eserese, multimedia, igodo, wdg.
Huawei MateBook X Pro: Ọ bụ ụdị ọkachamara, yana nhazi ngwaike kachasị ike. Ọ na-elekwasị anya na arụpụtaghị ihe na-arụ ọrụ na ibu ndị dị arọ. N'ezie, ha bụkwa ndị kasị ọnụ nke usoro.
N'ime usoro isiokwu ọ bụla ị ga-ahụ ụdị dị iche iche, iji megharịa ihe ị chọrọ. Ya bụ, ị ga-ahụ nhazi dị iche iche nke processor, kaadị eserese, RAM, ikike nchekwa, ọdụ ụgbọ mmiri dị, nha ihuenyo, wdg.
Uru nke laptọọpụ Huawei
Uru maka ego nke kọmpụta ndị a dị ezigbo mma, na mgbakwunye na ịmecha nke ọma. Mana nke a nwekwara laptọọpụ ndị ọzọ, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ nkọwa pụrụ iche nke ị nwere ike ịhụ na laptọọpụ Huawei ọ bụghị na ndị ọzọ, ị nwere ihe ndị a:
NFC: ha bụ naanị akwụkwọ ndetu dị n'ahịa nwere teknụzụ NFC. Ha abaghị uru maka ịkwụ ụgwọ na ụlọ ọrụ, dị ka ekwentị mkpanaaka, ma ọ bụ ụfọdụ wearables, mana ọ bụ ọrụ nzikọrịta ozi na-adọrọ mmasị n'etiti ngwaọrụ ndị a na ekwentị mkpanaaka mgbe ngwaọrụ abụọ dị nso.
Huawei Share: ọrụ a nwekwara ike inyere gị aka na Huawei laptọọpụ na gị mobile, ebe ọ na-enye gị ohere jikọọ Huawei mobile ngwaọrụ site Bluetooth 5.0 ma ọ bụ WiFi Direct. Ya mere, a ga-ahụ ihe na-eme na ihuenyo mkpanaka na ihuenyo laptọọpụ, na ị nwere ike ijikwa òké na keyboard ma ọ bụ dọrọ faịlụ site na otu ngwaọrụ gaa na nke ọzọ.
Sensorlọ ihe mmetụta ụlọ- Ihe mmetụta ndị a na-ewu ewu na ngwaọrụ ndị ọzọ, mana ọ bụghị na laptọọpụ. Kama Huawei gụnyere ihe mmetụta a nke na-achọpụta ọnụnọ nke oghere ndọta na ikpe ahụ, dị ka ndọta. Site na ya, enwere ike ijikwa ọrụ dị iche iche.
Ihuenyo: Ogwe ndị Huawei na-eji na imewe na-eme ka ha nwee obere etiti, nke bụ mgbakwunye. Anya ha na-adị mma nke ukwuu, na-ahapụ ihe mmetụta igwefoto dị n'elu keyboard, ihe nwere mmetụta ọzọ dị mma ...
Igwefoto webụ eweghachi: ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ nwere kamera weebụ ahụ ekpughere, na Huawei ọ na-emegharị, ka ị na-ebugharị ya naanị mgbe ịchọrọ iji ya ma ghara ichegbu onwe gị maka oge ndị ọzọ. Ihe yiri nke Lenovo na-eme n'ụdị AIO ya, iji kwalite nzuzo. Ya bụ, ọ bụrụgodị na ụfọdụ ndị omempụ na-achịkwa akụrụngwa gị, ha agaghị ahụ gị.
Mkpisiaka mmetụta: ha na-etinyekarị sensọ biometric iji gbakwunye nchekwa ọzọ, inwe ike iji akara mkpịsị aka gị gbochie.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Huawei dị ọnụ ala
Onebụ otu ika ewu ewu nke ukwuu, ị nwere ike ịhụ ọnụ ala Huawei laptọọpụ na a otutu nke na-ebupụta, na online nyiwe. Dịka ọmụmaatụ, ha pụtara:
Amazon: nnukwu ikpo okwu North America nwere ọtụtụ ụdị nke usoro Huawei dị iche iche. O nwere ike ịbụ otu n'ime ụlọ ahịa ebe ị ga-ahụ ụdị dị iche iche. Na mgbakwunye, ị maralarị na ọ bụ ikpo okwu ntụkwasị obi, na ha ga-eweghachi ego gị ma ọ bụrụ na ihe emee, yana ị nwere ike irite uru na ọsọ ọsọ na mbupu n'efu ma ọ bụrụ na ị nwere ndenye aha Prime.
Ụlọikpe Bekee: ị gaghị ahụ ọtụtụ ụdị na agbụ Spanish, ma ọ bụ ọnụ ahịa kacha mma. Ma ọ bụ nhọrọ ọzọ a pụrụ ịdabere na ya na ezigbo ọrụ ndị ahịa ma ọ bụrụ na ihe emee. N'ezie, ị nwere ike họrọ ịga ụlọ ahịa ịzụta Huawei laptọọpụ ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ichere, ma ọ bụ ịtụ ya site na webụ ka ebuga ya n'ụlọ gị.
nrutu: yiri nke gara aga. Agbụ ụlọ ahịa Gala nwekwara ọtụtụ ụdị Huawei ịhọrọ, yana ọnụ ahịa dị mma. Ị nwere ike ịtụ ha site na ebe nrụọrụ weebụ ya ma ọ bụ gaa na ebe kacha nso ịzụta ya na ụlọ ahịa anụ ahụ n'onwe ya.
mediamarkt: Na German yinye nwekwara Huawei laptop ụdị na na ezigbo ọnụ ahịa. Dị ka njedebe, dị ka abụọ gara aga, enwere ụdị ụdị dị iche iche dị. Ma n'aka nke ọzọ, ọzọ ị nwekwara nhọrọ ịzụta online ma ọ bụ n'onwe.
Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ Huawei dị ọnụ ala?
Mgbe ole mkpa otu ọhụrụ maka telecommuting, ịgụ akwụkwọ ma ọ bụ maka ntụrụndụ, ị nweghị ike ichere. Kọmputa aghọwo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwá ọrụ dị mkpa. Ya mere, oge ọ bụla bụ oge dị mma iji nweta otu. Agbanyeghị, ị nwere ike chere maka mmemme ụfọdụ ebe ị nwere ike zụta ya dị ọnụ ala, dịka:
Black Friday: A na-eme mmemme a na Fraịde nke anọ nke Nọvemba ebe a na-echekwa nnukwu na obere, anụ ahụ na ntanetị, nwere nnukwu ego na ngwaahịa ha. Ọ bụ ohere dị mma ịzụta laptọọpụ Huawei na ọnụ ala dị ala, ebe ọ bụ na ọ ga-abụ na ụfọdụ ụdị dịnụ nwere ụfọdụ ụdị mbelata etinyere. Mgbe ụfọdụ, mbelata ndị ahụ nwere ike ịdị elu dị ka 20% ma ọ bụ karịa.
Ụbọchị Mbụ: Ọ bụ ụbọchị pụrụ iche maka ndị nwere ndebanye aha Amazon Prime. Ọ bụrụ na ị nwere ọrụ a, ị nwere ike ịnweta onyinye pụrụ iche na ụdị ihe niile, gụnyere laptọọpụ. Na mgbakwunye, dị ka ọ dị na mbụ, ị nwere ike ịnụ ụtọ mbupu n'efu na nnyefe ngwa ngwa.
Cyber ​​Monday: naanị Mọnde na-esote mgbe Black Friday gachara, enwerekwa ohere ndị ọzọ dị oke ọnụ iji zụta nnukwu ego n'ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ọ bụ oge kacha mma ma ọ bụrụ na Black Friday ị chọtaghị ihe ịchọrọ, erere ya, ma ọ bụ enweghị mbelata n'oge ahụ.
Laptọọpụ Huawei, ọ bara uru ya? Echiche m
Ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ laptọọpụ Huawei, eziokwu bụ nke ahụ kwesịrị n'ihi ọnụahịa na uru ha na-enye, ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ dị oke ọnụ na nhazi nha nha. Na mgbakwunye, uru ndị ahụ m kwuru n'elu na-emekwa ka ngwaọrụ ndị a bụrụ ihe pụrụ iche, yabụ ọ bụrụ na ịnweela ekwentị Huawei, ọ nwere ike ịbụ ezigbo nnweta.
Ma mgbochi na vetoes Site na US, echere m na ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi karịa ihe ọ bụla ọzọ. Na mbụ, ọ ga-ekwe omume iche echiche banyere nsonaazụ dị njọ, mana eziokwu, dị ka m kwuru, bụ na Huawei na-aga n'ihu na-ebugo ọgbọ AMD, Intel na NVIDIA ibe, yana ịnye Microsoft Windows 10 arụnyere mbụ.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Huawei laptọọpụ